मुक्त आकाश - साप्ताहिक
अविरल थापा, असार १७, २०७६
घर–परिवार र आफन्तमा पनि कहिले को सम्पन्न र कहिले को विपन्न हुन सक्छ । धनीको पछि धेरै जना लाग्छन् तर गरिब अनि कमजोरलाई सबैले हेप्छन् । आज सानो भएको मान्छे भोलि ठूलो हुन्छ, आजको निर्धन भोलि धनी हुनसक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, असार ७, २०७६
यौनको भोक विवाहित वा अविवाहित दुवैमा समान हुन सक्छ । आफ्नो यौनसाथी हुँदाहुँदै पनि मानिसले अतृप्त भएर वा भनेको समयमा उपलब्ध नभएर वा असन्तुष्ट भएर यौनको भोक मेट्न वैकल्पिक उपाय वा साथीको खोजी गर्न सक्छ । सकेसम्म मायाजालमा पारेर, नभए पैसा तिरेर, सहमतिमै पनि वा कसैलाई परिबन्धमा पारेर पनि मानिसले आफ्नो यौन–प्यास मेट्न खोज्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, जेष्ठ २०, २०७६
विक्रम संव्त २०५८ साल जेठ १९ गते राति नेपालको नारायणहिटी राजदरबारमा वीभत्स हत्याकाण्ड भयो । कसैले कल्पनासम्म नगरेको उक्त घटनामा परी राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रलगायत अन्य राजखलकले समेत ज्यान गुमाए । पुरा पढ्नुहोस्
बुद्धम् शरणम् गच्छामी
अविरल थापा, जेष्ठ १३, २०७६
भारतले बुद्धको कृत्रिम जन्मस्थल बनाउन लाग्यो, भारतमा जन्मिएको भनेर पाठ्यपुस्तकमा राख्यो भनेर हामी विरोधमा उत्रियौं । अर्काले भन्यो भन्दैमा विरोध मात्र गरिरहने कि आफूसँग भएको सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिने ? पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, वैशाख २१, २०७६
आफूले पाएको दुःख सन्तानले नभोगून्, कुलतमा नलागून्, अनावश्यक खर्च नगरून् भनेर पनि आमा–बाबु सचेत रहन्छन् । बाहरूले बरु धेरै कुरा बेवास्ता गर्लान्, तर आमाको मन त्यस्तो हुँदैन । आमाले गर्ने साना–ठूला सबै गालीमा माया मिसिएको हुन्छ । संसारको सबैभन्दा मीठो गाली भनेकै आमाको गाली हो । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, वैशाख ११, २०७६
यो मनको बानी अनौठो हुन्छ । कति कुरा नजिक हुँदा वास्ता गर्दैन तर टाढा भएपछि सोधखोज गर्न थाल्छ । चिन्दै नचिनेको मानिसको पनि न्यास्रो लाग्न सक्छ । सधैं स्कुल–कलेज जाँदा वा कार्यालय जाँदा कतिपय मानिस बाटो वा बसमा प्रायः सधैं देखिन्छन्, भेटिन्छन् तर बोलचाल,हुँदैन । एउटै बाटोमा भेटिने मानिस धेरै दिनसम्म आएन भने मनले, आँखाले खोज्न थाल्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, चैत्र १९, २०७५
मानिस हेर्दा जतिसुकै बलवान् लागे पनि यो धर्तीको सबैभन्दा कमजोर प्राणी हो । ऊ सदैव अरूको सहारा खोजेर हिँड्छ, चाहे मनको होस् वा तनको । अरूसँग खुसी खोज्छ, अरूसँग प्रेम खोज्छ । मोलतोल गर्छ । कोसँग सम्बन्ध राखेर कति खुसी हुन्छु, सुखी हुन्छु भनेर हिसाब–किताब गर्छ, सम्बन्ध राख्छ तर मानिसको जिन्दगीमा सदैव बेरुजु निस्किन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, चैत्र ४, २०७५
होली वा फागु पर्व आदि हरेक पर्वका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक आयाम हुन्छन् । फागु पर्व मनाउने मौसम भनेको जाडो सकिएर गर्मी सुरु भएको बेला हुन्छ । यो मौसममा मानिसको शरीरमा पनि हार्मोनको उतारचढाव हुने र ऋतुकाल प्रारम्भ हुने हुँदा फागु मनाउँदा युवायुवतीहरूले आपसमा गीत गाएर त्यसमार्फत वा नाचेर रंग र पानी खेलेर, चलेर यौन चाहनाको तृप्ती वा अभिव्यक्ति समेत प्रस्तुत गर्छन् भनिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, फाल्गुन १९, २०७५
शिवले गाँजा तानेको देखासिकी जो–कसैलाई गर्न मन लाग्छ तर शिवले कालकुट विष पिएजस्तो विष पिएर पचाउन सक्ने ल्याकत कति जनासँग छ ? त्यो कालकुट विषको अर्थ के थियो ? शिवले खरानी घस्नुको अर्थ के थियो ? बुझेर गर्दा हरेक कुरामा सार छ तर अरुले त्यसै गरेका छन्, दुनियाँ लाममा बसेको छ म पनि बसिदिन्छु भन्ने अन्धताले समाजमा झुन्ड मात्र तयार हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
अविरल थापा, माघ २८, २०७५
प्रेम मानिससँग हुने एक मात्र पवित्र भावना हो । यो सदैव एउटै र उस्तै हुनुपर्ने हो, तर समयसँगै, आधुनिकतासँगै परिभाषा परिवर्तन हुँदो रै’छ । बढ्दो सहरीकरण र बजारीकरणको प्रभावमा प्रेम भावना कम व्यापार बढी हुँदै गएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रिय शत्रु !
अविरल थापा, माघ २३, २०७५
धेरै शास्त्रले ऋणलाई पनि जिन्दगीको शत्रु मानेका छन् । ऋणले मानिसलाई चैनसँग सुत्न दिँदैन, तर ऋणमा परेको मानिस अल्छी हुँदैन । ऊ चलायमान हुन्छ, कमाउन प्रशस्तै मेहनत गर्छ । जिन्दगीमा जागरुक भैरहने हो भने धान्न सकिने सानोतिनो ऋण टाउकोमा बोकिरहनुपर्छ । पुरा पढ्नुहोस्